Ibali leThekhinoloji-iTekhnoloji kunye noKhuphelo lweSoftware
Isiseko se Unix
Uthotho kunye neMuvi
LezeMpilo kunye nokuPhepha
zombane kunye zombane
ISandboxie 5.55.22 yeelwimi ezininzi / 1.0.14 Ukudibanisa
admin Ngamana 18, 2022 akukho Izimvo
Inkcazelo ISandboxie sisicelo sesoftware esikhusela iinkcukacha zakho ngelixa ubrawuza iwebhu okanye usebenzisa isoftwe ekrokrisayo. Ukubrawuza iwebhu, ukukhuphela, okanye ukusebenzisa isoftwe kunokubangela ukhuseleko lwenkqubo…
[Qhubeka Ukufunda ...]
Inkcazelo MEmu Android Emulator Android software emulator egxile imidlalo Android. Ngesoftware ye-emulator ye-MEmu ungonwabela izihloko ezininzi ezizodwa onokuthi uzifake ngqo kwikhompyuter yakho. Wena…
Udemy –NestJS: IsiKhokelo soPhuhlisi esiGqibeleleyo sika-2021
Inkcazo I-NestJS: Isikhokelo esipheleleyo soPhuculo yikhosi yoqeqesho lokwakha umva kunye neNest, TypeORM, kunye neTypecript ebandakanya ukuvavanywa kunye nophuhliso. I-NestJS sisakhelo esingasemva sokwakha…
Inkcazo iWappler yisoftware enamandla yokuyila ujongano lomsebenzisi kunye neeprototypes zewebhusayithi kunye nosetyenziso lwewebhu, oluneenzuzo ezininzi kunezinye iisoftware ezifanayo njengeAdobe XD. …
I-Kali Linux 2022.2 x86 / x64
Inkcazo ye-Kali Linux lusasazo lwe-Linux olusekwe kwi-Debian Linux kwaye yenye yezona zinto zisasazwayo kubaphangi, abahlaseli kunye noochwephesha kwezokhuseleko. Olu hambiso lunikezelwa ngu…
Khuphela iAlpine Arena 1.1.577 - Android
IArena yeAlpine simdlalo wokutyibiliza onomdla oza nentshukumo kunye nomculo onika umdla. Ungakhuphisana nabanye abadlali kwaye uzame ukuphumelela. Izinto ezicocekileyo zomdlalo zisetyenziswa ngeendlela ezahlukeneyo…
Khuphela i-Gunner Diary 1.0.17.1003 - Android
Umdlalo weGunner Diary umalunga nebali legorha eliyintsomi elijonge ukutshabalalisa imikhosi engendawo. Unewonga elininzi esixekweni kwaye uyonwabela…
Khuphela iKhadi leGazi 1.0 - Android
Umdlalo weKhadi leGazi uhambisa indibaniselwano yezinto zokwakha ezinomtsalane kunye neRag Like, kwaye unokufumana amakhadi amandla kunye nokuseka inqaba yakho ngexesha lomdlalo. Olu luyilo luya kuba…
Khuphela i-Reckless Getaway 2 2.2.6 - Android
I-Reckless Getaway 2 luleqa oluchulumancisayo kunye nomlutha onokuthi ube nakho kwaye ukonwabele ngeemoto ezinkulu kunye neepic. Umdlalo unemizobo entle kakhulu kwaye elula kwaye ...
Khuphela iTeksi Sim 2016 3.1 – Android
Iteksi ye-Sim 2016 yenye yezona midlalo zibalaseleyo zokulinganisa iteksi yenkqubo yokusebenza ye-Android, onokufumana kuyo ngokukhuphela iTaxi Sim. Ukuba ufuna ukuthatha…
Khuphela iPirates Outlaws 3.30 – Android
IPirates Outlaws ngumlo phakathi kwamakhadi amagorha kwaye unokuba neqela labona balweli babalaseleyo kwiqela lakho. Abalinganiswa bayilwe kwangaphambili kwaye wena ...
Khuphela iMisongo yaBadala: Iintsomi 2.15.1 - Android
Imiqulu yabadala: Iintsomi zomdlalo weselula sisiphumo esinomtsalane esiya kwanelisa abalandeli bothotho lwe-Alder Scrolls. Umdlalo uboniswa ngohlobo lokudlala indima ...
1 2 3 4 ... 1,351 Okulandelayo
BONKE KWINKCUKACHA EYODWA
umhleli wevidiyo yeaudiyo
Ifashoni kunye nobuhle
Izithuba eziphezulu kunye namaphepha
Ibali leTekhnoloji Copyright © 2022.